Arigii ugu badnaa oo laga dhoofiyey Berbera - BBC Somali
Arigii ugu badnaa oo laga dhoofiyey Berbera
28 Sebtembar 2014
Image caption Ari laga dhoofinayo dekeda Berbara
Xilligan oo la joogo xajka waxaa dekedda Berbera, ee Somaliland laga dhoofinayaa xoolahii ugu badanaa.
Dr. Cali Maxamed Guuleed, oo ah dhakhtarka caafimaadka xoolaha ee magaalada Berbera, ayaa inoo sheegay in bishan September dalka Sacuudi Carabiya, u dhoofeen in ka badan 860,000 neef oo ari ah.
Xilligan ayaa u ah ganacsatada xoolaha soomaalida xilliga ugu wanaagsan, oo macaash badan ay ka helaan xoolaha udhxiyada ee ay u diraan xajka sannad walba.
Dhaqdhaqaaq badan oo xaami ah ayaa beryahanba lagu arkayay sayladaha xoolaha ee magaalooyinka Hargeysa iyo Burco, oo xoolo badan oo ari ah looga keenay dhulka Soomaalidu degto ee Geeska Afrika.
Xoolahan ayaa ka hor inta aan laga rarin dekedda weyn ee Berbera, waxaa lagu baaraa laba maxjar oo casri ah oo dhawr sanadood ka hor laga hirgeliyay Berbera, iyadoo iminkana dhismihiisu uu socdo maxjar saddexaad oo ganacsatada xooluhu maalgelinayaan.
Isu duwaha xanaanada xoolaha ee dekedda Berbera Dr. Cali Maxamed Guuleed, ayaa sheegay in guud ahaan xoolaha ariga ah ee sanadkan 2014-ka ka dhoofay dekedda Berbera ay dhanyihiin 2,262,774 neef oo ari ah.
Maamulka dekedda ayaa sidoo kale xilligan oo la joogo xajka ay aad ugu mashquulsan yihiin maraakiibta u gaarka ah xoolaha sidii ay muhiimmad gaar ah u siin lahaayeen, iyo adeeg degdeg ah si xooluhu markiiba u dhoofaan.